Webinar - Ndị na -akwado E -mbupụ
Anyị na -akpọ gị oku ka ị bịa webinar anyị na sistemụ ụtụ na Propars & Hellotax Europe na Wenezde, Septemba 8 na 14:00.
Usoro niile na ihe ịkwesịrị ị attentiona ntị na sistemụ ụtụ isi na Europe nọ na webinar a.
Vkù Ịntanetị N'efu
Usoro ụtụ isi na Europe
Kedu ka esi edebanye aha ụtụ isi?
F22, EUO, Tax, Vat wdg. gịnị bụ usoro ndị a?
8 Septemba Wenezdee 14:00 - 15:00
Ihe Omume Anyị Gara aga
Nweta nghọta COVID-post site n'aka ndị isi ecommerce
4 Septemba Fraịdee 16:00 - 18:00
20 Septemba Fraịdee 16:00 - 18:00
Ịhụnanya n'ịzụ ahịa
Fraịde, Septemba 24, 16:00 - 18:00
Kedu ka ecommerce si enyere ndị ọchụnta ego aka ka ha leba anya n'ihe banyere ọrịa na -efe efe
28 Septemba Fraịdee 16:00 - 18:00